Any Questions? ရှမ်းပြည်နယ် အစီအစဉ် ( တတိယပိုင်း) | DVB
Any Questions? Lead Story ဆောင်းပါး တိုင်းရင်းသားရေးရာ နိုင်ငံရေး ရွေးကောက်ပွဲ လွှတ်တော်ရေးရာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ
Any Questions? ရှမ်းပြည်နယ် အစီအစဉ် ( တတိယပိုင်း)
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် ပါတီတွေကို ပထမဆုံးအကြိမ် မဲပေးကြမယ့် First time voters လူငယ်တွေက သူတို့သိလိုသမျှတွေကို မေးမြန်းပြီး ပါတီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက ပြန်လည် ဖြေကြားပေးမယ့် Any Questions? အစီအစဉ်ကို DVB TV ကနေ တင်ဆက်ပေးနေရာမှာ ဒီတပတ်မှာ ရှမ်းပြည်နယ် အစီအစဉ် တတိယပိုင်းကို တင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ အဓိက ရုံးစိုက်ရာမြို့ကတော့ လားရှိုးမြို့။ ရှေးက လွယ်ရိုးအမည်ရှိတဲ့ ရွာငယ်လေး။ ဗမာဘုရင်အုပ်စိုးစဉ် တရုတ်- မြန်မာ စစ်ပွဲကာလက စစ်စခန်းထောက် ရွာလေးပေါ့။ ၁၉၀၄ ခုနှစ် အင်္ဂလိပ်အရေးပိုင် အုပ်ချုပ်ရာက စတင်ပေါ်လာတဲ့ မြို့လေးပါ။ တရုတ် – မြန်မာလမ်းမကြီး ဖောက်ပြီးတဲ့နောက် ယူနန်နဲ့ အဓိကကုန်သွယ်ရာမြို့ဖြစ်တာကြောင့် စီးပွားရေးအချက်အချာကျပြီး စည်ကားထင်ရှားလာခဲ့တယ်။
ရှမ်းမြောက်မှာတည်ရှိတဲ့ နောင်ချိုမြို့ကတော့ ဂုတ်ထိပ်တံတားကြောင့်လည်း ကြော်ကြားခဲ့တယ်။ ဂုတ်ထိပ်တံတားဟာ ပေသုံးရာကျော်မတ်စောက်တဲ့ ချောက်ကြီးနှစ်ခုကို ဖြတ်ပြီး တည်ဆောက်ထားပြီး ကမ္ဘာမှာ ဒုတိယအမြင့်ဆုံးတံတားအဖြစ် ထင်ရှားခဲ့တယ်။ ရှမ်းက ဟိုကွတ်ခေါ်တဲ့ ရွာကလေးကို ဗမာက ငုတ်ထိပ်လို့ ခေါ်ရာက ဂုတ်ထိပ်ရယ်လို့ တွင်လာခဲ့တာ။
သီပေါမြို့ကတော့ တချိန်က စော်ဘွားရုံးစိုက်ရာမြို့ပေါ့။ သီပေါမြို့ရဲ့ ဘော်ကျိုဘုရားပွဲဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူသိများ ထင်ရှားတဲ့ ပွဲပါပဲ။ ဘော်ကျိုစေတီသွားရာ လမ်းတလျှောက်ဟာ တောရိပ်တောင်စွယ်တွေနဲ့ ကွေ့ဝိုက်စီးဆင်းနေတဲ့ ဒုတ္ထဝတီမြစ်ရဲ့ အလှတွေကြောင့် ကြည်နူးဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ရာ ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ ဘော်ကျိုစေတီဆိုတာကလည်း ပုဂံပြည့်ရှင်ရဲ့ အစွန့်ပယ်ခံ မိဖုရား စောမွန်လှရဲ့ ကိုးဆူမြောက် လွမ်းစေတီ ဖြစ်ခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား။ တကယ်တော့ သီပေါမြို့ဟာ မိဖုရားသုံးပါးရဲ့ ဂန္ထဝင်အလွမ်းတွေနဲ့ နှောင်ဖွဲ့ ရစ်နွယ်နေတဲ့မြို့ပေါ့။ လွမ်းဆွတ်ဖွယ်ရာ အထုံတွေနဲ့ လွှမ်းခြုံနေလေရော့သလားလို့ ထင်မှတ်ရလောက်ပါပေ့။
စောမွန်လှလည်း လွမ်းစေတီတည်လို့ ကြေကွဲခြင်း သရုပ်ကိုဖော်ခဲ့တယ်။ သီပေါစော်ဘွား ဆာစောချယ်ရဲ့ မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ အလင်္ကာကျော်စွာ ဒေါ်စောမြအေးကြည်ကလည်း စော်ဘွားကြီးရဲ့ စိမ်းကားမှုကို မာန်ဟုန်တော်ပျိုး မျက်မာန်တော်ငြိုးပါနဲ့ ခိုကိုးသူပါရယ်လို့ စခန်းသာဟော်နန်းပေါ်ကနေ လွမ်းတမြေ့မြေ့ ခံစားရင်း မိုးဒေဝါပတ်ပျိုးကို ရေးဖွဲ့ပြီး ခံစားမှုမော်ကွန်းတစ်ခု ပြုခဲ့ရာနေရာလေးပေါ့။ ကံခေသူ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ စော်ဘွားကြီး စဝ်ကြာဆိုင်ရဲ့ မိဖုရား မဟာဒေဝီ စဝ်သုစန္ဒီပေါ့။ စဝ်ကြာဆိုင်က စော်ဘွားအာဏာနဲ့ လယ်သိမ်း ယာသိမ်းဖို့ ဝေးစွ သူပိုင်လယ်မြေတွေကို ရှမ်းတောင်သူတွေအတွက် ခွဲဝေပေးခဲ့ပြီး ရှမ်းစော်ဘွားတို့ရဲ့ လောင်းကစား စီးပွားရေးကို ဆန့်ကျင်သူ ခေတ်ပညာတတ်တစ်ယောက်ပေါ့။ သူလည်း ၁၉၆၂ ခုနှစ် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတော့ ဗထူးတပ်အတွင်းမှာ ထိန်းသိမ်းထားရင်း သေသလား၊ ရှင်သလားမသိ ပျောက်ဆုံးခံ လူသားတစ်ဦး ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။
ဇနီးသည်လေး မဟာဒေဝီ စဝ်သုစန္ဒီဟာ မုဆိုးမလား၊ တစ်ခုလပ်လား၊ သူ့မှာ လင်ရှိခဲ့သေးလားဆိုတဲ့ မသေချာမရေရာမှုတွေကို ရင်မှာ သိမ်းထုပ်ရင်း စဝ်မေရာရီနဲ့ စဝ်ကိန္နရီ သမီးနှစ်ယောက်ကို လက်မှာဆွဲလို့ ချစ်လင်နဲ့ ဝေးရာဆီကို လွင့်ပါးသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ အဲဒီအချိန်ကတည်းက ကျမချစ်လင်ဟော်နန်းရှင် ဘယ်မှာလဲဆိုတဲ့ တရှိုက်မက်မက် အမေးတွေနဲ့ ကွဲကြေနစ်ဆို့ဖွယ်ရာ တရားမျှတခြင်းရဲ့ အချစ်ပျောက်ရှာပုံတော် ခရီးရှည်ကြီးဟာ Twilight Over Burma ဆိုတဲ့ စာအုပ်နဲ့အတူ ကမ္ဘာမြေပြင်အနှံ့ ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်နေပုံက မဟာဒေဝီ စဝ်သုစန္ဒီရဲ့ လွမ်းတေးတစ်ပုဒ်ပင် ဖြစ်လို့နေပါတော့တယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ ကျမတို့အွန်လိုင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ မေးခွန်းမေးမြန်းမှုကို ပြန်လည်စတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ညီမလေး ကေခိုင်ဖြိုး မေးခွန်းလေးမေးပေးပါဦးရှင့်။
မေး။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျမက ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၊ ရွာငံမြို့နယ်၊ သိမ်ကုန်းကျေးရွာက ကေခိုင်ဖြိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ ရှမ်းပြည်နယ်မှာပေါ့နော်၊ ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ကျမတို့ ရှမ်းတောင်မှာလည်းပဲ ပြဿနာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီအထဲကမှ ကျမမေးချင်တာက ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ သတ္တုတွင်း ကိစ္စပေါ့လေ။ ဒီသတ္တုတွင်းကြောင့် လူ့အခွင့်အရေးတွေ အများကြီး ချိုးဖောက်ခံနေရတယ်။ အမျိုးသမီးငယ်တွေ၊ ကလေးငယ်တွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ များသောအားဖြင့် ခံနေရတယ်၊ ကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒါကိုလည်း ကြုံတွေ့နေရတယ်၊ ပြီးတဲ့အခါကျတော့ ရွာငံမြို့နယ်အတွင်းမှာ လုပ်ကွက်အသစ်တွေကိုလည်း တွေကိုလည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတာ တွေ့ရတယ်။ အဲဒီအပေါ်ကို ဒီကလူကြီးမင်းတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုသဘောထားတယ် ဆိုတာကို ကျမက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို မေးချင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အချိန်ရမယ်ဆိုရင် ဓနုတိုင်းရင်းသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကိုလည်း ကျမ မေးချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ NLD က ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါဦးရှင့်။
ဖြေ။ ။ သတ္တုတွင်းပေါ့နော်။ မြေအောက်သယံဇာတ တူးဖော်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ကျမအနေနဲ့ သိရှိခြင်းလည်း မရှိပါဘူး။ ဒါကတော့ အစိုးရရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရကနေပဲ ဖြေကြားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်။ ခုနက ညီမလေးမေးသွားတာဆိုရင် ဓနုကိုလည်း မေးသွားတယ်ဆိုတော့ ဓနုကလည်း ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါဦးရှင့်။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ခုနက သမီးမေးတဲ့ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသတွင်းမှာဆိုရင် သတ္တုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့မှ ပြဿနာတော်တော်များများ ရှိပါတယ်။ အခက်အခဲတွေလည်း အများကြီး ကြုံနေရပါတယ်။ အဲဒါကိုလည်း ကျနော်တို့ ပြောချင်နေတဲ့ကိစ္စပါ။ ကျနော်တို့ ဒီပါတီထဲမှာ ဝင်လုပ်တယ် ဆိုတာသည်လည်းပဲ ကျနော်တို့ ဒေသမှာရှိတဲ့ သယံဇာတတွေကို ဘယ်လိုသုံးစွဲမလဲ ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကို ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက် ပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ ကျနော်တို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ ရွာငံဒေသသည် သဘာဝသယံဇာတတွေ ထွက်တဲ့ဒေသ၊ နောက်ပိုင်းလည်း တော်တော်များများလည်း အလုပ်လာလုပ်နေတဲ့ ဒေသလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အခု လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သယံဇာတ ဥပဒေအရ ကျနော်တို့ဒေသ၊ အထူးသဖြင့် ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသမှာ ဘာမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသလိုမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ အားလုံး ပြည်ထောင်စု အစိုးရက ဆုံးဖြတ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လောလောဆယ် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ဒေသဦးစီးမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဒေသဦးစီးကိုမေးကြည့်ရင်လည်းပဲ မသိဘူးဆိုတာက ခပ်များများ ဖြစ်နေပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ပြောချင်တာက ကျနော်တို့ ဒီမှာကလည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ တောင်မှ သူတို့ အသေးစိတ် မသိတာလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ သတ္တုတွင်းကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျနော် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်ရရင်တော့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အားနည်းတယ်၊ မရှိဘူး၊ အဂတိလိုက်စားမှုတွေရှိနေတယ်လို့ ကျနော် ဒါ ဒီနေရာမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလိုပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒါ ကျနော်တွေ့ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံအရ ပြောနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ သမိုင်းကြောင်း ပြန်ကြည့်ရင်လည်း ဒါ သိနိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ပါတီအနေနဲ့ အနိုင်ရသွားလို့ရှိရင် ဒါတွေကို၊ သဘာဝသယံဇာတ ဥပဒေကို ပြင်နိုင်အောင် လုပ်ပါ့မယ်။ လောလောဆယ် ကျနော်တို့ ပါတီက အနိုင်ရသွားရင် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရမယ့် အချက်ထဲမှာလည်း ထည့်စဉ်းစားတာ ရှိပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့၊ ဒေသတွင်း သယံဇာတ ထုတ်လုပ်ရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစေရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှု မရှိစေရေး၊ ဒေသခံပြည်သူများ ထိခိုက်နစ်နာမှု မရှိစေရေးအတွက် ပြည်သူများနဲ့အတူ ပူးပေါင်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရမယ့် အချက်ထဲမှာလည်း ပြဌာန်းထားပါတယ်။
တကယ်မှာက၊ ကျနော်ဒီတစ်ကြိမ်မှာ ဝင်ပြိုင်မယ့် ကျနော်တို့ ရွာငံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၁ သည် သယံဇာတတွေ တော်တော်များများ ထွက်တဲ့ ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာများလည်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတဲ့ ဒေသ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒါတွေကို ကျနော် ဖြေရှင်းနိုင်မလားဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မေးမြန်းပေးသွားတဲ့ မောင်လေး ညီမလေးတွေကိုရော၊ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသွားတဲ့ ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
အခုဆက်ပြီးတော့ ကျမတို့ အမေးအဖြေကဏ္ဍကို ဆက်ပြီးတော့ သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျမတို့ဆီမှာဆိုရင် အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ လာပြီးတော့ မေးကြတဲ့လူငယ်တွေလည်း ရှိတယ်။ ပြီးတော့ ဗီဒီယိုနဲ့ ပေးပို့ပြီးတော့ မေးကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိသလိုပဲ၊ ကျမတို့ဆီကို စာတွေနဲ့ ပေးပို့ပြီးတော့ မေးလာကြတဲ့ လူငယ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ အခု ကျမက သူတို့ပေးပို့လာတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ကိုယ်စားမေးပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ပထမဆုံးကတော့ တောင်ကြီးကပေါ့နော်။ မောင်ထက်လွင်အောင်က မေးထားတာပါ။ သူက NLD ကိုပဲ မေးချင်ပါတယ်တဲ့။ မူးယစ်အမှုတွေမှာ ပစ္စည်းတန်ဖိုးနည်းရင် ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီးတော့ တန်ဖိုးများရင် ပိုင်ရှင်မဲ့ ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကို ဘယ်လိုမျိုး ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ပေးနိုင်မလဲ ဆိုပြီးတော့ NLD ကို မေးထားပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ အဲဒီတော့ NLD က ဖြေပေးပါဦးနော်။
ဖြေ။ ။ ဒါကတော့လေ ကျမ သိသလောက် ပြောရလို့ရှိရင် NLD ဆိုတာက နိုင်ငံရေးပါတီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ အစိုးရ ဖွဲ့နိုင်သော ပါတီ ဆိုသော်ငြားလည်း ကျမတို့ရဲ့ ပြည်ထဲရေးလက်အောက်မှာရှိတဲ့ တရားရေး၊ ရဲတွေပေါ့၊ ဖမ်းဆီးရေးတွေ၊ ရှာဖွေရေးတွေက သူတို့ရဲ့ ပြည်ထဲရေး အပိုင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထဲရေးအပိုင်းမှာ ကျမတို့ ပါတီတွေက ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်၊ ကူညီလို့ပဲ ရပါတယ်။ ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှ ကျမတို့က ဝတ္တရားနှောင့်ယှက်တာမျိုးတွေ လုပ်လို့မရပါဘူး။ ကျမတို့က လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို ပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့ အမှုဖွင့်ပေးတယ်၊ ရဲတွေကိုချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းကိုပဲ ကျမတို့က လုပ်လို့ရတာပါ။ ဒါ နိုင်ငံရေးပါတီကို မေးတဲ့အတွက် ဖြေတာပါ။
အစိုးရဘက် အပိုင်းကလည်း ပြည်ထဲရေးအပိုင်းကို ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်လို့ အခုအချိန်မှ မရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗစ်တိုးရီးယား ကိစ္စတွေကနေ၊ ဘယ်လိုကိစ္စ အကြီးကြီးကအစ ပါတီကနေပြီးတော့ လုံးဝ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်လို့ မရပါဘူးရှင့်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ ကဲပါ၊ နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်စောင်က ကျတော့ မျိုးမင်းထက်က မေးထားတာပေါ့နော်။ သူကတော့ ဟားခါးကပါ။ သူမေးထားတဲ့ မေးခွန်းကတော့ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းမှာတဲ့ အများဆုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ သတ္တုတွင်းနဲ့ ဘိလပ်မြေစက်ရုံတွေကြောင့် ဒေသခံတွေရဲ့ တောင်ယာတွေ၊ သဘာဝရေထွက်တွေ၊ စားဝတ်နေရေးတွေက အများကြီး ဆုံးရှုံးနစ်နာနေတာတွေ ရှိတယ်ပေါ့။ ဒါတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမလဲ ဆိုပြီးတော့ သူကတော့ ပြည်ထောင်စု ပအိုဝ်းအမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ်ကို မေးထားပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုလို ကျနော်တို့ ပြည်ထောင်စု ပအိုဝ်းအမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ်ကို မေးမြန်းတဲ့အတွက်ကြောင့် မို့လို့လည်း အင်မတန်မှ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သိပ်ပြီးကောင်းတဲ့ မေးခွန်းလေး တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့က လာမယ့် ၂၀၂၀ အလွန်မှာ ကျနော်တို့ ပြည်ထောင်စု ပအိုဝ်း အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (ပ.အ.မ.ဖ) အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျနော်တို့ လုပ်သွားမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးက နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့။
ပထမတစ်ခုကတော့ State Building လို့ခေါ်တဲ့ လွှတ်တော်တွင်း လုပ်ရတဲ့ ကိစ္စရယ်၊ နောက်တစ်ခုက National Building လို့ခေါ်တဲ့ လွှတ်တော်ပြင်ပကနေ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု။ အခုမေးလာတဲ့ မေးခွန်းအရ ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ State Building ရဲ့ အောက်မှာ ရှိတယ်လို့ ကျနော်တို့တော့ မြင်တယ်။ ကျနော်တို့ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သွားဖို့ အစီအစဉ်က ၇ ခု ရှိပါတယ်။ State Building အောက်မှာ။ Border Trsade Control ပေါ့။ ဒီ ဘော်ဒါထရိတ် ကွန်ထရိုးလ်ကို ပြည်နယ်အဆင့်မှာ ကျနော်တို့ ပေါ်လစီတွေ ကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲ၊ ပြီးတော့မှ ခုနက ပြောတဲ့ Participatory Budgeting
ကျနော်တို့ ဟားခါးက ညီငယ်မေးတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့မှ ကျနော်တို့ လိုကယ်ပေါ့၊ ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေက သိပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ အဲဒီတော့ ဘယ်နိုင်ငံက ဘယ်လောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတယ်၊ ဘယ်ပြည်ထောင်စု အစိုးရက ဘယ်အခန်းကဏ္ဍမှာ ဘယ်လောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတယ် ဆိုတာက ကျနော်တို့ ပြည်သူလူထုတွေ အနေနဲ့ သိပိုင်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့ ချက်ချင်းဆိုသလို သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့ ဒေသမှာက ခုနပြောတဲ့ သတ္တုတွင်းတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မြေယာသိမ်းဆည်းတဲ့ ကိစ္စတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခုနပြောတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကိစ္စတွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ချက်ချင်းကို ရောက်လာတဲ့ အဆင့်တွေရှိတယ်။
အဲဒီတော့ ၂၀၂၀ အလွန်မှာ အဲဒီလိုမျိုး ပြဿနာတွေ လျှော့ချလို့ရအောင် ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့က ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်း ၂၀၂၀ ကြားမှာ အစိုးရနှစ်ဆက်ရဲ့ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေ၊ ပြီးတော့မှ ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေဟာ ဘယ်လိုမျိုး Process တွေနဲ့ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ် ဆိုတဲ့ဟာတွေကို ပြည်သူလူထု အနေနဲ့ သိအောင်လို့ ကျနော်တို့ လုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်။
နောက်တစ်ခုက လာမယ့် ၂၀၂၁၊ ၂၀၂၂ ကနေ ၂၀၂၅ မှာ အကယ်၍ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တခုခု သို့မဟုတ် ပြည်တွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တခုခု လာရောက်လုပ်မယ်။ ကျနော်တို့ဒေသထဲမှာ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတော့မယ် ဆိုရင်တော့ ဒေသခံ ပြည်သူလူထုတွေနဲ့ ထိပ်တိုက်မှုတွေ မဖြစ်အောင် ကျနော်တို့ အဖြစ်နိုင်ဆုံးကိုတော့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရှိတယ်။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ပြောတဲ့ State Building အောက်မှာ ကျနော်တို့ လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာ ပါတယ်ပေါ့လေ။ ဒါကတော့ အဓိက ကတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိအောင်တော့ ကျနော်တို့ ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို ပြောပြခြင်းပါ။
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်။ ကျေးဇူးပါဆရာ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အခု နောက်ထပ် လားရှိုးကပေါ့နော်၊ ညီမလေး အေးငြိမ်းသူက မေးထားတဲ့ မေးခွန်းလေးလည်း ရှိပါသေးတယ်။
မေး။ ။ ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုတွေအတွက် ဘယ်လိုကာကွယ်ပေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်ပေးမလဲ၊ ဘယ်လိုအခွင့်အလမ်းတွေ ရအောင်လုပ်ပေးမလဲ။ SNLD ကို မေးထားပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့။ ဆရာစိုင်းကျော်ညွန့်ရှင့်။ ဆရာတို့စကားနဲ့ ပြောရရင်တော့ ဒါ တခြားနေရာမှာ သန်စွမ်းတဲ့ သူတွေအတွက် ဆရာတို့အနေနဲ့ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ပေးမလဲဆိုပြီးတော့ မေးထားပါတယ်။
ဖြေ။ ။ ဒေသန္တရမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေက ဘာဖြစ်လို့ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာပြီးတော့ နိုင်ငံတော်က မကိုင်တွယ်နိုင်သလဲဆိုတော့ကာ၊ မူလစည်းမျဉ်းကို ပြန်သွားကြည့်ရင် ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ စနစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဗျ။ စနစ်က ဘာလဲဆိုတော့ အကုန်လုံးက ဗဟိုဦးစီးပြီးတော့ အကုန်လုံး ချုပ်ကိုင်ပြီးတော့ လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေ၊ သက်ဆိုင်တဲ့မြို့မှာ ဖြစ်နေပျက်နေတဲ့ အသေးစိတ်ကိစ္စတွေက အပေါ်ကို သိပ်ပြီးတော့ မရောက်ဘူးဗျ။
အဲဒီတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့က တစ်ခုချင်းစီ အသေးစိတ်သွားလုပ်နေမယ့်အစား ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ ဒီ ဖက်ဒရယ်မှာ ပြည်သူနဲ့ အနီးဆုံး အစိုးရကို ပါဝါပေးတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဥပမာ – တချို့ကိစ္စတွေက ပညာရေး ပါတယ်ဗျာ။ အခုလိုမျိုး ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ ကိစ္စတွေပါမယ်။ အဲဒီကိစ္စတွေမှာ ဘယ်သူကဖြင့် အဓိကအားဖြင့် လုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာ ဒေသန္တရ အစိုးးရပေါ့ဗျာ။ ပြည်သူနဲ့ အနီးဆုံးရှိနေတဲ့ ဒေသန္တရ အစိုးရကို စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့် ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် ဒါက ဒီကိစ္စတွေကို ပိုပြီးတော့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စတွေကတော့ ဒေသန္တရ အစိုးရကတော့ ဘတ်ဂျက်ကတော့ ဖြည့်ဆည်းဖို့က ခက်ပါတယ်။
ဘတ်ဂျက်ရလမ်းကလည်း၊ ကောက်ခံပိုင်ခွင့်ကလည်း နည်းတာကိုး။ အဲဒီတော့ ငွေရေးကြေးရေး အပိုင်းကိုတော့ ပြည်ထောင်စု အဆင့်ကနေပြီးတော့ ပံ့ပိုးပေးပြီးတော့ ဒီကိစ္စတွေကို လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်က ပြည်သူနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးမှာနေတဲ့ အစိုးရပေါ့ဗျာ၊ ဒါက ကျနော်တို့ နိုင်ငံကို ပုံသဏ္ဍန်ပြောင်းလဲမှပဲ ဒါတွေက အဆင်ပြေမယ်လို့ မြင်တယ်။
ပြည်သူနဲ့ ဝေးနေတဲ့ ဗဟိုအစိုးရက ဒီကိစ္စတွေကို အသေးစိတ် သိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူစီမံချက်ဆွဲရင်လည်း ပြီးပြည့်စုံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အဲဒီလိုကိစ္စတွေကအစ အသေးစိတ် လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ဆိုရင်တော့ဖြင့် ခုနကျနော်ပြောသလို ပြည်သူနဲ့အနီးဆုံး အစိုးရကနေပြီး စီမံခန့်ခွဲတဲ့၊ ဖြစ်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပုံစံကို ကျနော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် ဒီကိစ္စတွေဟာ ပိုပြီးတော့ လွယ်ကူရှင်းလင်းပြီးတော့ လုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်း ပိုပြီးတော့ ထိရောက်မယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့။ ကျမတို့ အခုဆိုရင် အွန်လိုင်းကမေးထားတာတွေရော၊ ဗီဒီယိုနဲ့ မေးလာတာတွေ ရှိတယ်။ အခုဆိုရင် စာနဲ့မေးတာတွေ ရှိတယ်ပေါ့။ အဲဒီမှာဆိုရင် သူတို့ လက်တွေ့မြေပြင် အခြေအနေမှာ သူတို့ ကြုံတွေ့နေရတာတွေ၊ သူတို့ ရင်ဆိုင်နေရတာတွေကို မေးခွန်းတွေကတစ်ဆင့် ကျမတို့ နည်းနည်းတော့ သိလာရပြီပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ နွယ်နီ့ဆီမှာရော ဘယ်လိုအချက်အလက်၊ ဘယ်လို ပြဿနာမျိုးတွေ ရှိလဲပေါ့။ အဲဒါလေးလည်း ပြောပြပေးဦးနွယ်နီ။
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်။ ဒီဟာကတော့ နွယ်နီတို့ ဆာဗေးမှာ မေးခွန်းလေးတစ်ခု ထည့်မေးခဲ့တာပေါ့နော်။ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာတွေက ဘာတွေလဲဆိုပြီးတော့ မေးခဲ့တာပေါ့နော်။ ဒါကတော့ သူတို့ အွန်လိုင်းကနေ ဖြေဆိုထားကြတာပါ။ အွန်လိုင်းပေါ်က ဆာဗေးပါရှင့်။ သူတို့ ဖြေဆိုထားတာက မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာကို ၁၉ ရာခိုင်နှုန်း။ မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာကတော့ မွန်ပြည်နယ်မှာလည်း ဖြေကြတာများတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်း မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာက အများဆုံးဖြစ်တယ် ဆိုပြီးတော့ ဖြေကြတာ တွေ့ရပါတယ်ရှင့်။
ငြိမ်းချမ်းရေးပြဿနာကတော့ ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း ဖြေဆိုထားကြတယ်။ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ ပညာရေးကို တန်းတူဖြေဆိုထားတာ တွေ့ရတယ်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးက ၁၁ ရာခိုင်နှုန်း ဖြေဆိုထားကြတယ်။ နောက် စီးပွားရေးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ကတော့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း တန်းတူညီမျှ ဖြေဆိုထားတာကို တွေ့ရတယ်။ အခြားဆိုတာလေးကတော့ ကျန်းမာရေးတို့၊ တိုင်းရင်းသား စာပေအရေးတို့၊ နောက်ပြီးတော့ မြေယာအရေးတို့ကို ပေါင်းထားတာပေါ့။ ဒါကတော့ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း ဖြေဆိုထားတာကို တွေ့ရပါတယ်ရှင့်။
ဟုတ်ကဲ့။ ဒါဆို ကျမတို့ မေးခွန်းတွေမှာဆိုရင်လည်း ပညာရေးလည်း တော်တော်ပါတယ်။ မြေယာတို့၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာဆိုတာလည်း တွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်၊ ဒီရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာပေါ့။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အခုဆက်ပြီးတော့ စာနဲ့ပေးပို့ပြီးတဲ့မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဆက်ပြီးတော့ မေးပေးသွားဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွတ်ခိုင်က မိုင်နေဝင်းမောင်က မေးထားတာပါ။
မေး။ ။ သူကတော့ NLD ကို မေးထားပါတယ်။ ဒီ Conflit Area မှာရှိတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် ဘာလုပ်ပေးမှာလဲ။ IDP Camp တွေအတွက်ရော ဘာလုပ်ပေးမှာလဲ။ နောက်ပြီးတော့ မြေမြှုပ်မိုင်း ပြဿနာတွေကိုရောပေါ့၊ ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့ သူက NLD ကို မေးထားပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ NLD က ဒေါ်ဝင်းဝင်းနွယ်၊ ဖြေပေးပါဦးနော်။
ဖြေ။ ။ ဒီ Conflit Area မှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာက များသောအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်နေတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရကာလကြီးမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပဲ ဦးတည်ပြီးသွားနေတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Conflit မဖြစ်အောင် အထူးဂရုစိုက်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ အခု လက်ရှိ အမတ်တွေလည်း Conflit ဒေသတွင်းမှာ နေနေတာတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ဘာတွေနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့နဲ့ တပ်မတော်နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ခြင်း တွေနဲ့ပဲ မူတည်ပါတယ်။ အစိုးရကြောင့် ဖြစ်သွားတဲ့ ပြဿနာမျိုးဆိုတာ ကျမတို့ မကြားရသလောက်ပါပဲ။
အဲဒီဖြစ်စဉ်ကို ကျမကိုယ်တိုင် ဖတ်ခဲ့ရတာမျိုး မရှိပါဘူး။ ဖေ့စ်ဘုတ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဂျာနယ်တွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ Conflit ဒေသကို ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့၊ လုပ်ခဲ့ပေးပြီးသားဟာတွေကလည်း ဒီ လားရှိုးမြို့နယ်ထဲမှာဆိုရင် ဆရာထင်လင်းဦးတို့ ဦးဆောင်ပြီးတော့မှ စစ်ဘေးရှောင်တွေ နေဖို့ စခန်းတွေ၊ အဆောက်အဦတွေ ဆောက်ပေးနေတယ်။ နောက်တစ်ခါ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အောက်မှာ ရှိတဲ့ မြို့နယ်၊ ပြည်နယ် အဆင့်ဆင့် ဒီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာ ရိက္ခာတွေ၊ အဝတ်အစားတွေ ထောက်ပံ့ ပေးနေတာမျိုးတွေလည်း ရှိတယ်။ အဲဒီဒေသကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့၊ တစ်ခါတလေမှာ ကျမတို့ဒေသမှာ ရှိပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ ခိုဝင်နေတာတွေ၊ သူတို့ရဲ့ ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းတွေမှာ ရှိနေတာတွေကို ကျမတို့ဆီမှာလည်း မှတ်တမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကို သွားပြီးတော့ စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ပေးတာတို့၊ နောက်ပြီးတော့ ကျောင်းနေမယ့် ကလေးတွေကို ကျောင်းအပ်နှံရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာတို့ ဒါမျိုးတွေကတော့ ကျမတို့ လုပ်ပေးနေပါတယ်။
လက်ရှိကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းကို နှစ် ၇၀ လောက် နောက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အခုအချိန်အထိ မငြိမ်းချမ်းသေးတဲ့ အကြောင်းရင်းဟာဆိုရင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပဲ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ကျမတို့ အစိုးရကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးတည်ပြီးသွားနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ဒီအပိုင်းကိုတော့ ကျမတို့အနေနဲ့ ပြောကြားလိုခြင်း မရှိပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းချင်တာပေါ့။
မဲပေးလိုက်ရင် ကျနော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ ဘာအခွင့်အလမ်းတွေ ရမလဲ။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ရကြမလားလို့ သက်ဆိုင်ရာလူတွေကို တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ လူငယ်တွေ အနေနဲ့ ဒီမြို့မှာ အလုပ်အကိုင် မရှိကြဘူး။ နောက်ပြီးတော့ လမ်းဘေးမှာနေတဲ့ ကလေးတွေ ဆေးသမား ဘဝကနေ၊ အဲဒီလိုမျိုး ကလေးလေးတွေကို စောင့်ရှောက်စေချင်တာ။ လမ်းကောင်းလမ်းမှန် ပြန်ရောက်အောင်လို့။ ဒီမဲပေးရင် ကျနော်တို့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ ဘာတွေပြောင်းလဲလာမလဲလို့ ကျနော်ကတော့ ထပ်ပြီးတော့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဒီနှစ်က လူငယ်တွေလည်း အများကြီး လှုပ်ရှားပါဝင်လာကြတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျမ မျှော်လင့်ထားတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲက ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ တွေထက် ပိုပြီးတော့မှ တရားမျှတမှု ရှိမယ်။ ပိုပြီးတော့မှ မှန်ကန်မယ်လို့ ကျမအနေနဲ့ ယုံကြည်ထားတယ်။ အဲဒီလိုလည်း မျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီ မျှော်လင့်ချက်အတိုင်းပဲ အထဲမှာရှိတဲ့ လူကြီးတွေကလည်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။
ပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ ပြီးရင် မဲကိုလည်း၊ ကိုယ်ပေးရမယ့် မဲကိုလည်း တကယ်အလုပ်လုပ်မယ့်သူ၊ တကယ့် ပြည်သူ့စကားသံကို နားထောင်ပေးမယ့်သူ၊ ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုပေးမယ့်သူကို မဲပေးစေချင်တယ်ဗျ။ မဲကို ပေးဖြစ်အောင်ပေးဖို့လည်း တိုက်တွန်းပါတယ်ဗျ။
တကယ်လို့ ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ကပေါ့နော်၊ တကယ်လို့ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် မဲဆန္ဒနယ်မြေအတွက်ပဲ အကျိုးပြုတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဒေသတစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုနိုင်တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကျမ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဒါကတော့ ကျမတို့ အဖွဲ့သားတွေ ကြိုတင်ရယူထားတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်က ပထမဆုံး မဲပေးမယ့်သူတွေရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရင်တွင်းစကားသံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ ကျမတို့ရဲ့ အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်မေးမြန်းချင်တဲ့လူငယ်တွေကို ကြိုတင်ရယူထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ဖွင့်ပြပေးချင်ပါတယ်။
မေး။ ။ ကျမနာမည်က ဒီဒီစန်းထွေး ပါ။ နေတာက လားရှိုးမှာပေါ့နော်။ လာမယ့် ၂၀၂၀ မှာ ပထမဦးဆုံး မဲထည့်ရမယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီအတွက်လည်း အရမ်းရင်ခုန်တယ်။ အခုက ဘယ်ပါတီကို မေးချင်လဲဆိုတော့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ကို မေးချင်တယ်ပေါ့နော်။ ကျန်းမာရေးအပိုင်းမှာ မေးချင်တယ်။ ဥပမာ – ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာပဲပေါ့နော်၊ အရမ်းဝေးလံခေါင်းပါးတဲ့ ဒေသမှာဆိုရင် ကျန်းမာရေးက အရမ်းနိမ့်ကျနေသေးတယ်ပေါ့နော်။ ဆေးခန်းတော့ရှိတယ်။ တိုက်နယ်တွေမှာပဲ ရှိတယ်ဆိုရင် သူတို့က အဲဒီဆေးခန်းသွားရဖို့ အရေး လမ်းကလည်း အရမ်းခက်ခဲတယ်။ ရွာမှာလည်း ဆေးဝါးတွေလည်း မရှိဘူး။ အဲဒီဆေးခန်းသွားဖို့အရေး လမ်းတဝက်နဲ့တင် အသက်တွေဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ ပြည်သူတွေ အများကြီး ရှိတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် မဲနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်၊ ဘယ်လိုမျိုး လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရှိလဲ၊ ပြီးရင် ဘယ်လိုမျိုးနည်းလမ်းတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်မလဲ အဲဒါလေး သိချင်တယ်ရှင့်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ သူကတော့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို မေးထားတဲ့အတွက် ပြန်လည် ဖြေကြားပေးပါဦးရှင့်။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ကျန်းမာရေးကိစ္စကတော့ အင်မတန်လည်း ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး တစ်ချက်ကတော့ ကျန်းမာရေးကိစ္စကတော့ တချို့ကပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါက သိပ်ပြီး ဝင်ငွေသိပ်မရှိတဲ့ လုပ်ငန်းဆိုတော့ တချို့ဌာနတွေက သိပ်မလိုချင်ကြဘူးဗျ။ တကယ်တမ်းကျတော့ ဒါက အခုနက ကျနော်ပြောခဲ့သလိုပဲ ဒါ ပြည်နယ်အဆင့်၊ ဒေသန္တရအဆင့်တွေကအစ အနည်းဆုံး ပြည်နယ် အဆင့်မှာကတော့ ဒီ ကျန်းမာရေးကိစ္စကို ကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ရှိဖို့လိုပါတယ်။
ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်အဆင့်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာ ကျတော့လည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘတ်ဂျက်ငွေတွေ များများချပေးဖို့လိုပါတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ မလိုလားအပ်ဘဲနဲ့ စစ်ရေးအသုံးစရိတ် လိုမျိုးကျတော့ ရာခိုင်နှုန်း မြောက်မြားစွာဖြစ်ပြီးတော့၊ ရှင်းရှင်းပြောရရင် တိုက်တယ်ခိုက်တယ် ဆိုတာက ကျနော်တို့ ပြည်တွင်းကပိုများနေတာကိုးဗျာ။ အဲဒီမှာ သုံးစွဲမယ့်အစား ဒီကျန်းမာရေးတွေ၊ ပညာရေးကိစ္စတွေမှာ သုံးစွဲတယ်ဆိုရင် ပိုပြီးတော့ ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့က အကြံပြုချင်တယ်။
တကယ်လို့ ကျနော်တို့မှာ ဒါမျိုးလုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ဖြင့် အရင်ဦးဆုံး တိုးပေးသင့်တဲ့ ကိစ္စက ဒီ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး ဘတ်ဂျက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ ကျေးဇူးပါ။ အဲဒီတော့ အခု မေးခွန်းတွေမေးပေးကြတဲ့ ညီမလေးတွေကိုရော၊ ဖြေပေးကြတဲ့ ဆရာတို့ကိုရော အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
Previous story ကိုဗစ်-၁၉ လူနာအသစ် ၁,၀၁၂ ဦးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းက ၈၁၄ ဦးပါဝင်
Next story Any Questions? ရှမ်းပြည်နယ် အစီအစဉ် ( အပိုင်း ၄ နောက်ဆုံးပိုင်း)